Fakafaka: volan’ny teny malagasy indray ! | NewsMada
Misy isan-taona ny fanamarihana ny Volan’ny teny malagasy , rehefa jona tahaka izao. Azo adika io fa misy ny teny malagasy, fa ny hoe velona na tsy velona kosa, mbola hifanakalozan-kevitra, angamba. Izay fisiana izay ihany koa anefa toa mbola mampatsiahy fa manan-tompo ny teny malagasy. Inona anefa ny vitan’ireo tompony ireo manoloana ity fananany? Famotehana, fanaovana tsinontsinona, sns. Misy aza ny sahy milaza fa “tsy ampy ny teny malagasy”, “ireo olona tsy lasa lavitra loatra no mbola mifikitra amin’ny teny malagasy”…
Ny fahitana ireny rehetra ireny no anisan’ny angovo nanosika ny mpikarakara sy ny mpandala ny teny malagasy, hanamarika isaky ny volana jona ny Volan’ny teny malagasy. Maro izy ireny no manatanteraka hetsika isankarazany, toy ny fampirantiana, velakevitra, fifanakalozan-kevitra, fifampizarana traikefa sy fahalalana ary fahaizana momba ny teny malagasy, sns.
… Fa vitsy kosa anefa ireo afaka mitohy na manohy ireny karazana hetsika ireny rehefa dila ny volana jona. Io no tena banga be ka mahatonga ny sasany hiteny fa “afo mololo ihany ny anareo isaky ny volana jona”. Tsy ratsy akory ny ranty, ny varo-boky, ny velakevitra, sns, fa tokony ho efa hitady paikady vaovao indray hoenti-mampitombo sy manatevina ny teo aloha. Katsahina mba hitohy izy ireny.
… Amin’izay fotoana izay, tsy ho Volan’ny teny malagasy intsony fa ho zary “Isan’andron’ny teny malagasy”. Tsy vitan’olona tokana na fikambanana vitsivitsy anefa izany fa mila fiaraha-mientan’ny Malagasy rehetra mihitsy. Mila mandray andraikitra ny isan-tsehatra. Tsy ny fandikana ny teny vahiny ho teny malagasy no zava-dehibe fa ny fampiainanana ny Malagasy ny teniny. Raha manaja sy manome hasina ny teny malagasy ny Malagasy, hipoitra ao anatin’izay ny tena fitiavan-tanindrazana.